के बालेन पनि रन्जु दर्शना जस्तै सामाजिक संजालमा हाईहाई र निर्वाचनमा बाईबाई हुने हुन् त ? यस्तो छ कुरा ! – Sandes Post
May 7, 2022 1075
काठमाडौँ – स्थानिय निर्वाचनमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर चर्चामा आएको नाम हो बालेन। हुन त बालेन आफ्नो कलाको कारणले पनि पहिले देखि चर्चामा शिखरमा थिए। तर यतिबेला कलाले भन्दा पनि नगर प्रमुखको उम्मेदवारीले गर्दा चर्चाको शिखरमा छन्। सामाजिक संजालमा यतिबेला बालेन कै मात्रै हाईहाई छ। समाजिक संजालमा बालेनले एकछत्र राजा गरेका छन्। तर जति सामाजिक संजाल बालेनले ओगटेका छन् कुनै समय रन्जु दर्शनले पनि ओगटीकी थिइन्।
रन्जु दर्शन पनि विवेकशील साझाबाट मेयरको उम्मेदवारी दिएसंगै चर्चामा थिइन् तर उनले स्थानीय निर्वाचनमा पराजयको सामना गर्नु पर्यो। मत सामाजिक संजालमा होइन मतपेटीकामा खस्नु पर्ने कुराले गर्दा दर्शना पछी परिन्। यदिबेला बालेनको जताततै क्रेज छ चर्चा छ सामाजिक संजालमा एकलौटी साशन छ तर के यो क्रेज मतपेटीकामा मतको रुपमा खस्छ त ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
के बालेन रन्जु दर्शनाको दोस्रो भर्जन हुन् ?
पछील्लो समय नियाल्नु पर्दा बालेन शाह र रन्जु दर्शनको स्टाइल देखिपनि बालेन अहिले फरक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। परिपक्क भिजन लिएर बालेन जनताको बीचमा आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास र समृद्वको लागि खोज र अनुसन्धान योजना जनताको बिच राखेका छन्। र, त्यो योजना जनताले निकै मन पराएका छन्।
यसो हेर्नु पर्दा स्टाइल एकै भएपनि प्रस्तुत हुने शैली फरक छ। युवा नेतृत्वलाई दुवैले प्राथमिकता दिएपनि बालेनले युवा नेतृत्व सँगै भिजन पनि दिएका छन्। त्यसैले बालेन रन्जु दर्शनाको दोस्रो भर्जन होइन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
बालेनले जित्ने सम्भावना कति छ ?
सामाजिक संजालमा जताततै बालेनको मात्रै चर्चा छ तर चर्चा जति भएपनि मत दिन पाउने अधिकार काठमाडौँ महानगरपालिका वासीको मात्रै रहेको छ। त्यसैले यस अघि रन्जु दर्शनाको पनि बालेनको जस्तै सामाजिक संजालमा हाईहाई थियो तर निर्वाचनमा जनताले बाईबाई गरेका थिए। बालेन पनि दर्शना जस्तै पात्र हुने हुन् कि भन्ने कुराको चर्चा चल्न थालेको छ।
बालेनले दिएका भिजनले युवापुस्ताहरु आशावादी छन्। त्यसैले दर्शनालाई भन्दा बढी मत पाउने सम्भावना बढी रहेको छ। तर जित हाँसिल पाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तर पछिल्लो समयको माहोल हेर्दा बालेनको पक्षमा जनतामा सकारात्मक छन्। त्यसैले बालेनले जित्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।
के बालेन नेपाली केजरीवाल हुन् त ?
यसो हेर्नु पर्दा बालेनले देखाएको योजना र भारतको दिल्लीमा केजरीवालले देखाएको योजनाहरुमा मिल्नेमिल्ने र सम्भव प्रकारको रहेको छ। यसो हेर्नु पर्दा बालेनको पछी पनि केजरीवालको जस्तै जनताको क्रेज छ। र, आशाको एउटा बल्दै गरेको दियो छ।
बालेनलाई पनि एउटा मौका दिने हो भने केजरीवालको जस्तै कमाल देखाउने निश्चित छ। बालेनले दिएको भिजन यसो हेर्नु पर्दा लगभग सबै पुरा हुने खालको छ। र, बालेन आफ्नो भिजन प्रति बफादार हुने कुरा उनको जीवनस्तरले बताउँछ। पैसाको कमी उनलाई छैन। नाम उनले आफ्नो कलाले कमाइसकेका छन्। अब उनी सबै कुरा भएपछी भ्रष्टाचारमा रुमलिएर बस्ने छैनन् जस्तो देखिन्छ।
केजरीवाल र बालेन दुवै इन्जिनियर हुन्। दुवैसंग भिजन छ। देशको लागि आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने क्षमता छ। र, देश विकास गर्ने हुटहुटी छ। दुवै कुनै न कुनै पेसामा आवद्व भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। दुवै आफ्नो देशको राजनीतिबाट असन्तुष्ट भएर राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन्। व्यवस्था र अवस्था दुवै परिवर्तन गर्न उनीहरु राजनीतिमा आएका हुन्। केजरीवाल राजनीतिमा स्थापित भइसके छन् भने बालेन राजनीतिमा स्थापित हुने क्रममा छन्।
अब नेपालमा केजरीवालको उदय हुनको लागि बालेन मात्रै वैकल्पिक रहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेनको जित नै यूवाहरुको जित हो। र, नेपाली केजरीवालको उदय हो। बालें जस्तो सक्षम र भिजनवाला नेता अरु हुन् सक्दैन।
Prevकांग्रेसलाई जिताउनुस सबैलाई सकिँदैन केहीलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिन्छु
Nextटेलिकमको निर्वाचन अफर : ९८ रूपैयाँमा ६ जीबी डेटा, अरु के-के छन् प्याक ?